ငါးပြားစေ့ ကို လှူတဲ့နေရာ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်တွေ မှာ box ကလေး တွေ မတွေ့လား။ထည်.ခဲ.ပေါ။ ပြောမဲ.သာ ပြော တာ ကိုယ့်ဆီ မှာလဲ ပုံလို.။
တို.ကတော. မွတ်စတာဖာ ကနေ ၁၂ ကျပ်တန် ဝယ် တယ်။ အချစ် ကိုကို အတွက် ဆိုတော. အကောင်းဆုံး။ ကိုယ့်အတွက် ကတော. ပြဒါးတိုင် ရှိတယ်။ ကိုယ့်အတွက် ကတော့ မသုံ့းရပါဘူး။ သူဘဲ ကဒီးကဒီး ဖျားတာဘဲ။ နေပူ မိလို. ဖျားရတာနဲ.။ မိုးရွာလို.ဖျားရတာနဲ. ။ အလုပ်ပင်ပန်းလို.ဖျားရတာနဲ့။
စလုံးမှာ နေတဲ့ သူ များ အကြောင်း သိတယ် မစဟုတ်လား။ အမျိူး အရင်းကြီးတောင် တစ်ယောက် ကို ပြဒါးတိုင် တစ်ချောင်းပါ။
(ဟိုတုံးက လက် ရည် တပြင် စီး လား …….မသိဘူး။ လက်မောင်းသွေးဖောက် သစ္စာ ပြူကြ မလို့လား ။ လာမပြောပါနဲ့။ ရောဂါတွေ ကူးကုန်ဦးမယ်။ )
သာမိုမီတာ မမြင်ဘူးသူများ အတွက်
ဘာ ရယ် မဟုတ် ဂျိူင်း မှာလဲ အဖျား တိုင်းကြ တယ် ဆိုတာ သတိ ရတာနဲ. သိတ် အားနေ လို့ ဝင် ရှည် ကြည်ှုတာပါ။
Axillary temperate က body temperature ထက် 0.5°F (0.3°C) to 1°F (0.6°C) နည်းတယ် လို.ဆိုပါတယ်။
နောက်တော့မှ ငါးပြားစေ့တွေ စုပြီး သွားလှုပါဦးမယ်ဗျာ။ ကွန့်မန့်အတွက် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း။
စလုံးမှာနေတာဆိုတော့ (သိပြီးသားလားတော့မသိပါဘူး) DBS ဘဏ် အကောင့်ရှိရင် အကြွေလဲလို့ ရတဲ့ စက်တွေရှိတယ်ရှင့် ။ ၅ပြားစေ့ ဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် ၊သူက ၁စေ့ ကို ၀.၀၀၇၅ ပြား နှုန်းနဲ့ ပြန်ကောက်တယ် ။း)
မရောက်တာ တော်ကြာပေါ့. လာလည်တာ ကျေးဇူးပါဗျာ...
အဲလိုတော့ ကြားဖူးသေးဘူးဗျ။ လဲလို့ရတဲ့ နေရာ ရှိရင်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ နော။ နေရာလေး သိရင် ဝေမျှပါဦးဗျာ..
U can change at Ang Mo Kio Hub
ဒါဆို ကျွန်တော့ ငါးပြားစေ့တွေ စုပြီး သွားလဲ ဦးမှပဲ...
ကျေးဇူးပါဗျာ.... Anonymous ခင်ဗျာ...
Here is my web site :: http://ncm.gu.se/
Look into my weblog - elevtv.ro